बिहे हुनुभन्दा अगाडीनै छोराको बाउले भगाए हुने वाला बुहारीको आमा – Khabar Silo
काठमाडौं ७ माघ- प्रेम अन्धो हुन्छ तर, कति अन्धो हुन्छ यो भने बुझ्न सकिएको छैन । प्रेम कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ । तर, स्थिति त्यतिबेला अप्ठ्यारो बन्छ जब हुनेवाला बेहुलाका पिताले हुनेवाली बेहुलीकी आमा भगाइदिन्छन् ।
यस्तो घ’टना भारतको गुजरातको सूरत जिल्लामा भएको छ । यहाँ फेब्रुअरीमा एक जोडीको बिहे हुनेवाला थियो । तर, बिहेभन्दा पहिल्यै बेहुलाका पिताले बेहुलीकी आमा भगाइदिए । घट’नापछि दुवै परिवारमा विवा’दसमेत भएको छ । हुनेवाला जोडीको विवाह तोडिएको छ ।
दुवै परिवारका अनुसार बेहुलाका पिता र बेहुलीकी आमाबीच पहिल्यैदेखि चिनजान थियो । अब दुवै परिवारले उनीहरुले बिहे गरिसकेको हुन सक्ने आ’शंका गरेका छन् । सूरतको काटरगामका युवकको बिहे नवसारीकी युवतीसँग हुनेवाला थियो । पुलिसका अनुसार बिहेको ठिक एक महिना अगाडि बेहुलीकी आमा घरबाट बे’पत्ता भइन् ।
धेरै खोज्दा पनि नभेटेपछि परिवारले पुलिसमा गएर बे’पत्ता भएको रिपोर्ट लेखाए । जाँचमा बेहुलाका पिता पनि त्यही दिनदेखि बे’पत्ता भएको खुलासा भयो । भागेका दुवै अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । पुलिसमा रि’पोर्ट गरेको १० दिन पछि दुवै परिवारले हुनेवाला वै’वाहिक सम्ब’न्ध तो’डे । यी दुईको विवाह १ वर्ष पहिले त’य भएको थियो । याे घटना निकै अचम्म रहेकाे छ ।
दाँत पाचन प्रकृयामा मात्र होइन मानिसको ब्यक्तित्वमा समेत महत्वपुर्ण छ । सफा, मिलेको दाँतले मानिसको सुन्दरतामा विकास गर्दछ । अझ शरीरलाई दाँत अनिवार्य छ । खाना चपाउनु दाँतको सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम हो । तर दाँतको राम्रोसँग हेरचाह भएन भने यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ । तसर्थ दाँतलाई जोगाउन निम्न काम गर्नु पर्दछ । १. दाँतको सुरक्षा […]
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै […]
एक मुखे रुद्राक्ष देख्ने बित्तिकै ॐ लेखि एक सेयर गर्दै पूरा पढ्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुनुका साथै शक्तिशाली वरदान पाइने , एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचे`को ठाउँबाट धन लाभ हुने गर्दछ । बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष को वर्णन शिवपुराण`को रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिव`को प्रतीक पनि मानिन्छ […]